Yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-roosterfish | Ngeentlanzi
Kwinqaku lanamhlanje siza kwazi nzulu ngohlobo lwaselwandle olubizwa ngokuba Iintlanzi. Le yenye yezona ntlanzi zinamandla elwandle kwaye inomtsalane njengomceli mngeni wokuloba kwezemidlalo. Ukuba namandla angaka, kunzima ukuloba ukuba awunabuchule okanye ubuchule ngentonga. Ke, njengendlela yokuzivavanya, le ntlanzi iyintlanzi. Igama layo lenzululwazi ngu I-Lepidorhombus boscii.
Ukongeza kumandla asemagqabini kunye nomtsalane wayo njengentlanzi yokuloba, ungafunda ngebhayoloji, iimpawu, indlela yokuziphatha, njl. Kweli nqaku. Ngaba uyafuna ukufunda okungakumbi malunga ne-roosterfish? Kufuneka uqhubeke ufunda.
3 Ukutya kunye nokuzala kwakhona
4 Ukuloba imidlalo ye Roosterfish
Njengakwi iintlanzi ezibheqwayo Inomzimba omkhulu ngokwaneleyo oyenza ikulungele ukuloba. Inobunzima obujikeleze iiponti ezingama-80 kwaye inobungakanani bomzimba obuziimitha ezi-3. Lo mzekelo mhle kakhulu uyimfuneko, nangona kuyinyani ukuba la manyathelo ayahluka. Kuxhomekeka kwindawo yokuhambisa apho ikhoyo, iya kuba nkulu okanye incinci.
Umzimba ngokubanzi ubude kwaye mkhulu unento ekhethekileyo. Kwaye icinezelwe kwinxalenye edlulileyo. Intloko yayo inde kwaye umva womelele kwaye ubumbekile. Umlomo unesimo se-oblique kwaye uphawulwe ngumgca odlula ngamehlo amabini ngokuthe nkqo.
Singena emlonyeni, sifumana umhlathi onamazinyo amancinci aprintayo kwaye une-18 gill rakers emazantsi omhlathi. Kwi-arch ephezulu ye-gill ine-12 kwezi brachispines.
Ngokuphathelele umbala, uyavela umbala o-bhulowu ongwevu oxutywe necebisi ngegolide umzimba wakhe uphela. Amachaphaza anawo emqolo kunye nasezinkingeni enza ukuba zihluke ngokulula ngakumbi. Inee-slats ezi-2 ezisuka kumqolo ongasemva kwaye zinwenwele kwi-anal fin kunye nenye ukusuka emqolo ukuya esiphelweni somsila.
Olu hlobo lwabelana ngendawo yokuhlala intlanzi yelamuni. Ngokuqhelekileyo ibonakala kwiindawo zokuhlala ezikufutshane nemimandla yonxweme. Uhlala efuna ukuhlala kufutshane nemifula yokubalekela kwiindawo ezinesanti eninzi. Ngelixa le ntlanzi ibalekela kwiindawo ezinesanti eninzi, intlanzi yelamuni ikukhapha ngelixa ulwandle.
Ngamanye amaxesha kuye kwafunyaniswa ukuba kusekwe kwezinye iilwandle, iilwandle kunye namachibi. Xa zisengamantshontsho kwaye zingakhuli ngokupheleleyo, zihlala emanzini anzulu ngaphandle kwengxaki.
Ixesha lonyaka apho ukubona kunye nokuloba kwalo kudla ngokuhamba kakhulu phakathi kwenyanga kaJuni ukuya kuSeptemba. Ngombulelo kwiintshukumo ezinobuchule ezinokuthi zenze, iyakwazi ukubonwa kwiindawo ezinje ngemilambo imilambo, iindawo ezinamatye kunye neendawo ezinamaza amakhulu.
Ukutya kunye nokuzala kwakhona
I-Roosterfish inesantya esikhulu xa ihamba kunxweme lolwandle. Enkosi ngamandla akhe okuzingela inokutya kwiintlanzi ezahlukeneyo ezinobungakanani obahlukeneyo phakathi kwazo sifumana inkunzi yenkomo okanye intlanzi yobhedu.
Umnqweno obaluleke kakhulu kukuba ukuba ezi ntlanzi ngamanye amaxesha xa izinga lokuzingela liphantsi kwaye baqala ukulamba kakhulu, baphela babhenela ekutyeni abantu. Bongeza ukutya kwabo kunye nemizekelo yohlobo olunye ukongeza ekusebenziseni gadalala isardadi kunye nekoi fish, abathi gqolo babaleqe de babanjwe batyiwe.
Ukumitha kwenzeka phakathi kwenyanga kaJulayi kude kube sekupheleni kukaFebruwari. Lixesha lokuba ukuzala kuphezulu. Ukuzalela amaqanda kunokwenzeka ngeendlela ngeendlela. Inye ikwixesha lokusukela ekupheleni kuka-Agasti ukuya ku-Novemba. Eyesibini iqala ngoFebruwari ukuya kuAprili. Eli xesha lixhomekeke kumzuzu apho kuye kwaba nokuhlangana khona kwaye nje ukuba ixesha lokudalwa kweqanda lidlule.
Ukuchumisa iRoosterfish kungaphandle. Njengoninzi lweentlobo zayo, izala kwiindawo ezingekho nzulu njengoko ziziva zikhuselekile. Ngokubanzi bajonge iindawo ezikufutshane nonxweme apho kukho ubunzulu obuncinci. I-fry eqanduselwa emaqandeni ine-symmetry egqibeleleyo kwaye ihleli kufutshane nomphezulu ide ifikelele ekuvuthweni.
Njengoko bekhula, bafumana uthotho lotshintsho. Umba uyahluka kwaye ngokuthe ngcembe uphulukana nolingano olukhankanywe apha ngasentla. Xa ethatha isigqibo sokuya elwandle, ukwenjenjalo ukuze azenzele isithuba seminyaka emibini ubuncinci.
Ukuloba imidlalo ye Roosterfish
Ezi ntlanzi ziphumelele kakhulu kwihlabathi lokuloba kwezemidlalo. Eyona nto ikhangelwe kakhulu ngabalobi ngumceli mngeni onzima ukoyisa kwaye oko kubenza babonakalise izakhono zabo zokuloba. Elona nani liphezulu leqondo lokuloba kwesi silwanyana kwenzeka ngenyanga kaMatshi nango-Epreli, xa zingazalanga ngokupheleleyo.
Ukuloba ngenjongo yokuthengisa inyama yabo kuyenziwe usebenzisa ubuchule bokutsala phakathi kwe-100 kunye ne-500 yeemitha ubunzulu. Ukuthengisa kuye kwanda njengoko kuye kwaduma ngokuloba kwezemidlalo. Owona mzekelo mncinci wokuloba uku-25 cm. Enye indlela esetyenzisiweyo ekubanjweni kwayo ngumda omde. Kubaluleke kakhulu ukuba iindawo apho kukho ulwando olukhulu ekulobeni kwazo zikulungele ukunciphisa ifuthe lokusingqongileyo elibangela oko.
Iindawo ezihambelana neNorth Atlantic zezi apho kuye kwenzeka khona ukubamba iisampulu ezinkulu ezinobude obuyi-140 cm. Nangona kunjalo, kwiMeditera kukho ezinye iisampulu ezinobungakanani obungaphantsi. Iindawo abaloba kuzo kakhulu zikwiGulf of Cádiz, uLwandle lwaseCantabrian kunye noMntla-Ntshona.
Ingxaki eyenzeka qho kolu hlobo lokuloba, kukuba ezinye iintlobo zeentlanzi ziyafumaneka xa ekujoliswe kuko yirockfish. Ukongeza, itshabalalisa i-morphology yaselwandle kunye neentlobo ze-algae.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi ngale ntlanzi idumileyo.
UHugo Yev sitsho
Molo, ingxelo entle kakhulu. Vela iflegi ibug. Igama lezesayensi nguNematistius pectoralis.
Phendula Hugo Yev